बर्षाको जीवनमा दु:खको बर्षा हुँदा थामिएन उनको आँशु, हे दैव यस्तो त कसैलाइ पनि भोग्न नपरोस्! (भिडियो हेर्नुहाेस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बर्षाको जीवनमा दु:खको बर्षा हुँदा थामिएन उनको आँशु, हे दैव यस्तो त कसैलाइ पनि भोग्न नपरोस्! (भिडियो हेर्नुहाेस्)
admin November 11, 2020 November 11, 2020 भिडियो, समाचार, स्वास्थ्य	0
समाजसेवी कमला परियारको यो बचाउ अभियान / बिगत १५ महिना पहिला सुत्केरी हुने क्रममा सुत्केरि हुदा काे चार दिनकाे दिन उनलाई निमाेनिया अर्थात फाेक्साे काे बिमार ले उनी ग्रस्त बनायो। हुन त हास्पिटलमा बेबि जन्माउँदा हामी सुरक्षीत महशुस नै गर्छाै तर त्यसो हुन सकेन । वर्षा गाैतमाका लागि उखानमा भने जस्तै बाँचे सुत्केरी मरे काल भने जस्तै भयाे । आज उनी १५ महिना देखि आक्सिजन र नेपाेलाइजर मेसिनकाे साथमा सास फेर्दै आएकि छन् ।
हजुरहरुले सहयाेग गर्नु भयाे भने वर्षा गाैतम लाई बचाउन सकिन्छ कि ?२०७७/०७/१५ गते देखि उनलाइ उपचार गराउन काठमाडौमा छु ।तपाईहरुकाे सानाे सहयाेग ले वर्षा गाैतमले पुनरजिबन पाउन सक्छिन् । मेराे अनुराेध हाल उनलाई डाक्टरले भने अनुसार फाेक्साे मा धेरै समस्या आएकाे छ भन्नूभयाे र दैनिक मुखबाट रगत जान्छ हाल रगत राेक्ने मात्रै उपचार गरेकाे छ ।
दुबै पट्टीकाे फाेक्साे infection देखाउदा गाह्रो भन्नूभएकाे छ तर समय मै उपचार गरे सम्भव भन्नू पनि भएकाे छ । please सहयाेग काे अपिल गरिएकाे छ । सम्पर्क नम्बर 9847338852 वा 9864263001 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ । यो भिडियो हेरेपछि सक्दो सहयोग गर्न अपिल गर्दछौं । सहयोगका लागि एनएमबी बैङ्कमा बर्षाका श्रीमान नाम Ajeep Bahadur Gautam को A/C 0240090961400016 मा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
संखुवासभा किन जाँदैछन प्रधानमन्त्री ओली?
४ वर्षीय बालकको पेटबाट यसरी निकालियो लक्ष्मीको मूर्ति
दशैंकै मुखमा कावासोतीबाट अायो दुर्घटनाको यस्तो दुःखद खबर